काठमाडौ । चीनले अनुदानमा दिएको अक्सिजन सिलिण्डर एमालेका सांसदहरुले घर–घरमा लुकाईरहेको भन्ने भ्रम फैलाउँन एउटा पंक्ति काठमाडौको नयाँ बानेश्वरस्थित शान्तिनगरतर्फ हुकिन्छ । साथमा पछिल्लो युबट्युबका क्यामेरा पर्सनपनि लिएर गइन्छ ।
एक जना नेपाली कांग्रेसका नेताले अभियान्ताको रुपमा चिनिएका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई फोन गरेका हुन्छन् । उनले शाहीलाई लौ न एमालेका सांसदले घरमा ४–५ वटाका दरले सिलिण्डर लुकाईरहेका छन् ।
सरकार उनीहरुकै छ पहुँच उनीहरुकै छ यसलाई भण्डाफोर गरिदिनुपर्यो उनले शाहीलाई भनेका हुन्छन् । त्यसपछि शाहीलाई साथ दिँदै आएका युबट्युबका पत्रकारलाई फटाफट फोन गरिन्छ ।
नभन्दै कही निक्कै भिजिटर बटुल्ने युबट्युबका क्यामेरा बानेश्वर आइहाले । त्यहाँ एक हुन नै तयार भयो । त्यो हुल शान्तिनगर छिर्यो । भनिएको लोकेशनमा पुगेर घर बाहिरदेखि नै कराउन थालिन्छ । त्यहाँ जे भयो त्यो केही थान सांसदको घरमा भेटिए अक्सिजन सिलिण्डर भन्दै सामाजिक सन्जालमा भिडियो पोष्ट आउन थालिहाले ।
भिडियो अहिले भाइरल छ । भिडियोमा निलो रंगका सिलिण्डरहरु भुइँतलाको भर्‍याङसँगै राखिएको देखिन्छ । लुकाउन लगिएको भए ढोकामा सबैले देख्नेगरी किन राखिन्थ्यो ।
जनताले अक्सिजन सिलिण्डर नपाएर अस्पतालमा ज्यान गुमाइरहेको बेला सांसदले घरमा अक्सिजन सिलिण्डर थुपारेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको आवाज सो भिडियोमा सुनिन्छ । त्यो घरमा पुगको टोलीले यो घरमा को छ ? यो सिलिण्डर कसको हो ? भन्दै कराइरहेको हुन्छ ।
संयोगले त्यही बेला सांसद गंगा चौधरी त्यहाँ पुगिन् । त्यो घर उनी नै बसिरहेको घर थियो । ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका युवाले उनलाई देखेपछि झनै आक्रोशित बनेको नाटक गर्न खोजे ।
सांसद चौधरीले धर्यतापूर्वक सबै बेलिबिस्तार लगाइन् । यहाँ राखिएका सिलिण्डर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला दाङ पठाउन तयारी गरेको सबै कागजपत्र देखाइन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको भरपाई ‘दाङको लमहीस्थित कोभिड आइसोलेसन सेन्टरका लागि आवश्यक भनेर अस्पतालले भरेको माग फारम सबै देखाईन् ।
उनी त्यो लिएर दाङ जानै आँटेकी थिइन् । आफू घरजाँदा अस्पताललाई सहयोग गर्न उनी आफैले त्यो काम गरेकी थिइन् । उनी त्यहाँ रुदै भनेको अर्को भिडियोपनि देखिन्छ । त्यसपछि उनीहरु आफै लज्जिद त हुँदै फर्किएको सांसद चौधरीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो अहिले म अक्सिजन लिएर दाङ आइसकेकी छु । यो सरकारलाई बदनाम गराउनका लागि गरिएको एक षड्यन्त्र भएको मैले बुझेकी छु ‘कांग्रेसीहरुले नेपाल सरकारलाई बदनाम गराउनका लागि त्यो गर्न खोजेका थिए, तर असफल भए,’ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल र भारतियको प्रवृती बुझेर नै भारत सरकारले अक्सिजन लुकाए, अ’वरोध ‘गरे ‘मृ’त्युद’ण्ड’को’ नि’र्णय गरेको हो । अनुशन्धानले के देखायो भने एउटै अक्सिजन सिलिण्डर लाखौ रुपैयाँमा किनेर घर–घरमा थुपारि राखिएको छ ।
अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर विरामीको मृत्यु भइरहेको छ । यसको मलजल पहुँच भएका उपल्लो दर्जाका व्यक्तिले गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोटामा पठाएका सिलिण्डर अस्पतालमा छैनन् । अस्पतालले अक्सिजन नभएर बिरामी भर्ना गर्दैनौँ भनिदिन्छ । उपचार गर्दा भन्दा अक्सिजन दिँदा लाभको ठूलो व्यपार भएपछि यति ठूलो अपराध भएको पाईयो । राज्यको निकायले तत्काल अस्पतालमा छापा मारोस् ।
अझै डरलाग्दो कुरा त यो छ अस्पताललाई भन्दा मोटो रकम लिएर व्यक्तिगत अक्सिजन सिलिण्डर भर्न अक्सिजन कम्पनीलाई भ्याई नभ्याई छ । यो अवस्थाको नियन्त्रण सरकारले तत्काल गरोस् ।
काठमाडौका अस्पतालहरुको माग आजका दिनमा जम्मा १४ हजार सिलिण्डर अक्सिजन हो । काठमाडौमा भएका उद्योगले हिजो मात्र १७ हजारभन्दा बढी सिलिण्डर भरेको रेकर्ड छ । त्यो क्षमता छ पनि तर अस्पतालहरुलाई जम्मा साढे ७ हजार सिलिण्डर पठाएको रेकर्ड छ ।
बाँकी कहाँ गयो ? तत्काल नखोज्ने, कडाई नगर्ने हो भने काठमाडौका घर–घर बस्ने व्यक्तिलाई पुग्नेगरी ६५ लाख सिलिण्डर ल्याएपनि अस्पतालमा अभाव नै भइरहनेछ । अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर नागरिकको मृत्यु हुनेछ । विपक्षी यसैलाई देखाएर राजनीति गर्नेछ । यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउछु ।